Nikasika ny Akanjon’i Jesosy Izy ka Sitrana | Fiainan’i Jesosy
Nikasika ny Akanjon’i Jesosy Izy ka Sitrana
MATIO 9:18-22 MARKA 5:21-34 LIOKA 8:40-48
SITRANA NY VEHIVAVY IRAY REHEFA NIKASIKA NY AKANJON’I JESOSY
Niely tamin’ireo Jiosy nipetraka teo amin’ny morony avaratrandrefan’ny Ranomasin’i Galilia ny vaovao hoe niverina avy tany Dekapolisy i Jesosy. Azo inoana fa maro no nahalala hoe vao avy nampitony tafio-drivotra izy. Nety ho nisy nahalala koa fa nanasitrana lehilahy roa nisy demonia izy. Nisy “vahoaka be” niangona hitsena an’i Jesosy àry teo amoron-drano, angamba tao amin’ny faritr’i Kapernaomy. (Marka 5:21) Efa tsindrian-daona izy ireo rehefa nidina ny sambokely i Jesosy.
Anisan’izy ireo i Jairo, mpitantana ny synagoga, angamba ilay synagoga tao Kapernaomy. Niankohoka teo an-tongotr’i Jesosy izy, ka niangavy azy imbetsaka hoe: “Efa ho faty ny zanako vavikely. Mba afaka mankany ve ianao, hametra-tanana aminy mba ho sitrana izy ka ho velona?” (Marka 5:23) Vao 12 taona io zanaka vavitokan’i Jairo io ary tena sarobidy taminy. Inona àry no hataon’i Jesosy rehefa nitalaho taminy mba hanampy azy io i Jairo?—Lioka 8:42.
Nisy zavatra hafa nampihetsi-po, tamin’i Jesosy teny an-dalana ho any an-tranon’i Jairo. Nientanentana ny olona maro nanaraka an’i Jesosy ary nieritreritra raha hanao fahagagana indray izy na tsia. Nisy vehivavy iray tao amin’ilay vahoaka anefa tsy nieritreritra afa-tsy ny aretina mafy nahazo azy.
Efa nijaly nandritra ny 12 taona io vehivavy jiosy io satria nandeha ra. Dokotera maro no efa nalehany ary lany tamin’ny fitsaboana samihafa nasain’izy ireo natao ny volany rehetra. Tsy sitrana anefa izy fa “vao mainka aza niharatsy” ny fahasalamany.—Marka 5:26.
Takatrao angamba fa sady nandreraka azy ilay aretiny no nahamenatra. Tsy miresaka ampahibemaso ny aretina toy izany ny olona matetika. Nilaza koa ny Lalàn’i Mosesy fa maloto ny vehivavy iray rehefa mandeha ra. Tsy maintsy misasa izay mikasika azy na mikasika ny akanjony misy ra, ary maloto mandra-paharivan’ny andro.—Levitikosy 15:25-27.
Nandre “ny momba an’i Jesosy” ilay vehivavy ka nitady azy. Naloto anefa izy ka niafinafina araka izay azo natao rehefa nanavatsava an’ilay vahoaka. Nieritreritra izy hoe: “Raha mikasika ny akanjony ivelany fotsiny aho, dia ho sitrana.” Vao nikasika ny mikiramborambo tamin’ny morontongotry ny akanjon’i Jesosy izy, dia tsapany fa nijanona ilay ra. “Sitrana tamin’ilay aretina nampijaly izy.”—Marka 5:27-29.
Hoy i Jesosy avy eo: “Iza no nikasika ahy teo?” Inona re no tsapan’ilay vehivavy tamin’izay e? Toa nanome tsiny an’i Jesosy i Petera, ka niteny hoe: “Ny vahoaka no manery anao manodidina sady mifanesika eo aminao!” Nahoana àry i Jesosy no nanontany hoe: “Iza no nikasika ahy teo?” Hoy izy: “Nisy olona nikasika ahy teo, satria tsapako fa nisy hery nivoaka tamiko.” (Lioka 8:45, 46) Nisy hery niala taminy matoa sitrana ilay vehivavy.
Hitan’ilay vehivavy fa nisy nahalala ny nataony. Natahotra sy nangovitra izy ary nandohalika teo anatrehan’i Jesosy. Notsoriny teo imason’ny olona rehetra ny aretiny sy ilay izy vao sitrana. Tsara fanahy i Jesosy ary nampahery azy ka nilaza hoe: “Ny finoanao no nahasitrana anao, anaka. Mirary soa ho anao aho, ary ho sitrana amin’iny aretina nampijaly anao iny anie ianao!”—Marka 5:34.
Be fitiavana sy mahay mangoraka tokoa ilay nofidin’Andriamanitra hitondra ny tany. Sady miahy ny olona izy no manana hery hanampiana azy ireo.
Nahoana ny olona no niangona mba hitsena an’i Jesosy rehefa niverina tao Kapernaomy izy?
Inona no nanjo ny vehivavy iray, ary nahoana izy no nitady ny fanampian’i Jesosy?
Ahoana no nahasitrana an’ilay vehivavy, ary ahoana no nampaherezan’i Jesosy azy?
Diniho ny fomba telo nampisehoan’i Jesosy fa tena nanahaka tanteraka ny fitiavan’i Jehovah izy.
Hizara Hizara Nikasika ny Akanjon’i Jesosy Izy ka Sitrana